Ilizwe elingenamhlaba: Ukusinda kwimpompo yiposti ye-apocalyptic idle clicker RPG | I-Androidsis
Ilizwe elingenamhlaba: Ukusinda kwimpompo, i-post-apocalyptic clicker RPG apho kuninzi ekufuneka ukwenzile
Ilizwe elingenamhlaba: Ukusinda kweTephu kuvela kwiMidlalo ye-Iron Horse kwimeko ye-beta ukuba yi-RPG yokucofa apho siza kuhamba khona kwihlabathi le-apocalyptic. Isihloko esitsha se-Android apho kuya kufuneka uqokelele izinto ezilahliweyo ukuze uziguqulele kwizixhobo eziza kukunceda uphile kwimeko enobutshaba.
Ke kuya kufuneka jongana nobuninzi bezilo Endleleni yakho yokuqokelela izinto ezilahliweyo ezilahliweyo, yenza izixhobo ezitsha kunye nezixhobo kwaye uphile kuloo mimandla apho kungekho nto ikulindeleyo kukufa ukuba awulumkanga. Ukucofa kwezo ucinezela kwiscreen rhoqo ukuze uqhubeke ngokukhawuleza.
1 Sinda iposti yehlabathi ye-apocalyptic
2 Yandisa izakhono zakho kwilizwe elingenanto: Cofa Ukusinda
3 I-RPG elungileyo engasebenziyo
Sinda iposti yehlabathi ye-apocalyptic
Ngesitayile esibonakalayo se-retro, Idle Wasteland: Tap Ukusinda kukusa kwi Thumela umhlaba we-apocalyptic ngononophelo kwiinkcukacha kwaye oko kunika umoya opheleleyo ukuziva apho uhamba khona ukusuka kwisibini yokuqala. Ngokupheleleyo, uya kuba neendawo ezi-6 ezahlukeneyo zokuzikhusela, ukuhlasela, ukuqokelela isinyithi esilahliweyo kunye nokuphuhlisa umthi opheleleyo wezakhono ukuze uphume kwiingxabano ezininzi ezikulindeleyo.
Kubalulekile ukuba ungachithi umzuzwana kwaye yonke inkunkuma oyifumanayo, ebekwe kumacala omabini esikrini, uyayiqokelela ngelixa ususa zonke izidalwa eziphilayo. Isinyithi esilahliweyo siyakuvumela ukuba uyiguqule ibe zizixhobo eziza kusetyenziswa ukwenza ezinye izinto zobugcisa zokuphucula izixhobo zakho.
Kanye njengoko kufuneka ukhawuleze ukuguqula izinto ezilahliweyo (ngethamsanqa sinofikelelo olukhawulezayo kwicala lasekhohlo lesikrini xa isenzo sokuzoba sigqityiwe), kuya kufuneka ube beka amanqaku ezakhono amatsha ukuba ufumana. Le yi-RPG, ke ngoko ukwandisa ubuchule obahlukeneyo beposi yakho ye-apocalyptic kubalulekile ukuba uqhubeke uqhubeke kakuhle.
Yandisa izakhono zakho kwilizwe elingenanto: Cofa Ukusinda
Oku kuyinyani ngomthi wobuchule bokuyila. Ekuqaleni uya kuqala ngotshintsho lwesinyithi esilahliweyo, ukuqhubeka nokwenza izinto ezilula kwaye ezintsonkothileyo eziza kukuvumela xhobisa iqela lakho. Kanye njengokuba unokwenza iinkqubo ezithile zenzekelayo zinje ngento yonke enxulumene nesinyithi esilahliweyo.
Ke zona ezo monsters uya kudibana nazo, ziya kuhamba ukwanda ngamandla kunye nokuhlaselwa njengalo lonke inani x Uya kujongana nomphathi wokugqibela apho kuya kufuneka usebenzise ezo zakhono zikhethekileyo ubuzifunda. Eyona nto intle malunga naba baphathi bokugqibela kukuba bayakuvumela ukuba ufikelele kwezona zinto zibalulekileyo nezinqabileyo zokuphucula izixhobo kunye nezixhobo.
Kwaye njengokucofa ngokungenzi nto, ukuba awuyidlali, iposti yakho ye-apocalyptic iya kuhlala isilwa. ngokungapheliyo ukuze xa ubuya ubeke endaweni loo manqaku afunyenwe. Indawo engenamhlaba: Ukusinda kwimpompo ngumdlalo we-retro osisa kuloo mzuzu xa yonke into ihambe gwenxa kwiplanethi yethu kwaye ibelulungelelwano kwabanye izihloko ezinjengeShelter Shelter, nangona umahluko ubuninzi kwisini.
I-RPG elungileyo engasebenziyo
Ngeliphandle, Idle Wasteland: Tap Ukusinda kusinika ezona mvakalelo zilungileyo nokuba kwisigaba se-beta. Kubalandeli bohlobo lwe-idles kunye ne-RPG, ngumdlalo ukuzama kwaye ngokuqinisekileyo umntu onokuhlala naye iintsuku ezininzi. Elinye lawona manqaku aphambili kwindalo esingqongileyo eyenzelwe ukusinika imvakalelo yokuba kwimeko engqwabalala enobugcisa beepikseli obenziwe kakuhle.
Ngokobuchwephesha ilunge kakhulu kwaye siyigqamisa Umsebenzi omkhulu kwimbonakalo yoyilo olusebenze kakuhle. Inomxholo omninzi wokuqhubeka nokudlala kwaye ukuqhubela phambili kunye nokuvela kweqhawe lethu kuhle kakhulu. Siza kuchitha ixesha elininzi sithatha isigqibo sokusebenzisa amanqaku ethu kunye nendlela yokuphucula ubuchule bokwenza izinto ezinamandla ngakumbi.
Indawo engenamhlaba: Ukusinda kweTephu kuza kwi-Android kwi-beta kodwa ikwimo entle. Unayo yasimahla kwiVenkile yokuDlala kuGoogle ukuze uzithuthuzele ngokudlala umgangatho wokucofa iRPG.
Ilizwe elingenamhlaba: Cofa usinde
Uhlobo oluhle lwe-retro
Unobugcisa kunye nezakhono ezininzi
Ezinye izandi zilahlekile
Ilizwe elingenamhlaba: Ukusinda kweZombie
Umthuthukisi: I-Iron Horse Games LLC
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Imidlalo ye-Android » Ilizwe elingenamhlaba: Ukusinda kwimpompo, i-post-apocalyptic clicker RPG apho kuninzi ekufuneka ukwenzile
Yenza iindwendwe zehotele kumgangatho wazo kumnandi, ihotele iMania